Mipetraka ao aminao i Kristy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Kristy velona ao aminao!
Ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no famerenana amin’ny laoniny ny fiainana. Inona no fiantraikan’ny fiainan’i Jesosy tafaverina amin’ny laoniny eo amin’ny fiainanao andavanandro? Ao amin’ny taratasiny ho an’ny Kolosiana, i Paoly dia nanambara zava-miafina iray izay afaka manome aina vaovao ao anatinao: “Ianareo efa nianatra izay nafenina taminareo hatramin’ny niandohan’izao tontolo izao, eny, izay nafenina taminareo tamin’ny olombelona rehetra, dia zava-miafina izay naharihary ankehitriny. kristiana rehetra. Momba ny fahagagana tsy takatry ny saina izay nomanin’Andriamanitra ho an’ny olona rehetra eto an-tany. Ianareo izay an’Andriamanitra dia mahazo mahafantatra izany zava-miafina izany. Izao no voalaza ao: Kristy velona ao anatinao! Ary noho izany dia manana fanantenana mafy ianareo fa Andriamanitra hanome anareo anjara amin’ny voninahiny » (Kolosiana 1,26-27 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Ahoana no niainan’i Jesosy ny fifandraisany tamin’ny Rainy fony izy teto an-tany? “Fa Izy no nihavian’ny zavatra rehetra, ary Izy no nihavian’ny zavatra rehetra, ary Izy no nihavian’ny zavatra rehetra” (Romana 11,36)! Izany indrindra no fifandraisan’ny Zanaka amin’ny maha Andriamanitra-olona sy ny Rainy amin’ny maha Andriamanitra azy. Avy amin'ny ray, amin'ny alàlan'ny ray, mankany amin'ny ray! “Izany no nilazan’i Kristy tamin’Andriamanitra fony Izy tonga teto amin’izao tontolo izao: Tsy nila sorona na fanomezana hafa ianareo. Fa vatana no nomenao ahy; izy no tokony ho lasibatra. Tsy tianao ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota. Izany no nilazako hoe: Tonga hanao ny sitraponao aho, ry Andriamanitro ô. Izany no lazainy momba ahy ao amin’ny Soratra Masina » (Hebreo 10,5-7 Fanantenana ho an'ny rehetra). Nanolotra ny ainy tsy misy fepetra ho an’Andriamanitra i Jesosy mba hahitan’ny zavatra rehetra voasoratra momba Azy ao amin’ny Testamenta Taloha ny fahatanterahan’izany ao aminy amin’ny maha-olona azy. Inona no nanampy an’i Jesosy hanolotra ny ainy ho sorona velona? Afaka manao izany samirery ve izy? Hoy i Jesosy: “Tsy mino ve ianao fa Izaho ao amin’ny Ray, ary ny Ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy lazaiko ho Ahy, fa ny Ray izay mitoetra ato amiko no manao ny asany” (Jaona 1.4,10). Ny maha iray ao amin’ny Ray sy ny Ray ao aminy no nahafahan’i Jesosy nanolotra ny ainy ho fanatitra velona.
Ny hevitra mety
Tamin’ny andro nanekenao an’i Jesosy ho Mpanavotra, Mpamonjy, ary Mpamonjy anao, dia noharian’i Jesosy tao anatinao. Ianao sy ny olona rehetra eto an-tany dia afaka mahazo ny fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Jesosy. Inona no nahafatesan’i Jesosy ho an’ny olona rehetra? "Izany no nahafatesan'i Jesosy ho an'ny olona rehetra, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay monina ao, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy."2. Korintiana 5,15).
Raha mbola miaina anao amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina i Jesosy dia manana antso iray, tanjona iray ary tanjona iray ianao: ny hanomezanao ny fiainanao sy ny toetranao manontolo ho an'i Jesosy tsy misy famerana sy tsy misy fepetra. Jesosy dia nanomboka ny lovany.
Nahoana ianao no tokony hamela ny tenanao ho variana tanteraka amin’i Jesosy? « Ary ankehitriny mananatra anareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrampon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, ​​masina, sitrak’Andriamanitra. Aoka izany ho fanompoam-pivavahana araka ny antonony.” (Romana 12,1).
Ny fanoloran-tena tanteraka amin’Andriamanitra no valinteninao amin’ny famindrampon’Andriamanitra. Ny fahafoizan-tena toy izany dia midika fiovana eo amin’ny fiainana manontolo. "Aza mampitaha ny tenanao amin'izao tontolo izao, fa miovà amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina" (Romana 1.2,2). Hoy i Jakoba ao amin’ny taratasiny: “Fa maty ny vatana tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana tsy misy asa.” (Jakoba) 2,26). Ny fanahy eto dia midika hoe fofonaina. Ny vatana tsy misy fofonaina dia maty.Ny vatana velona mifoka ary ny finoana velona no miaina. Inona no atao hoe asa tsara? Hoy i Jesosy: “Izao no asan’Andriamanitra, dia ny hinoanareo izay nirahiny.” (Jaona 6,29). Ny asa tsara dia asa izay niandohany tamin’ny finoana an’i Kristy izay mitoetra ao anatinao ary aseho amin’ny fiainanao. Hoy i Paoly: “Izaho no velona, ​​nefa tsy izaho ankehitriny, fa Kristy no velona ato anatiko.” ( Galatiana 2,20). Toy ny niainan’i Jesosy tafaray tamin’Andriamanitra Ray fony Izy tetỳ an-tany, dia tokony hanana fifandraisana akaiky amin’i Jesosy koa ianao!
Ho ahy dia tsy marina mihitsy ny filamatra any amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako. Tsy ny asako rehetra no nahatonga ny finoan’I Jesosy izay ato amiko. Hitanay ny antony sy ny antony nahatonga ny tantaran'ny famoronana.
Namorona ny olombelona Andriamanitra mba hahafaly azy ireo sy hanehoany ny fitiavany amin'ny alalàn'izy ireo. Noho ny fitiavany dia napetrany tao amin'ny saha Edena i Adama sy i Eva ary nomeny fahefana amin'ny zaridaina sy izay rehetra ao izy ireo. Niaina tao amin'ny paradisa niaraka tamin'Andriamanitra tamina fifandraisana akaiky sy akaiky izy ireo. Tsy nahalala na inona na inona momba ny "tsara sy ny ratsy" izy ireo satria nino sy natoky an'Andriamanitra voalohany. Adama sy Eva dia nino ny laingan'ilay menarana mba hahita ny fahatanterahan'ny fiainana ao aminy. Noho ny fianjerany dia noroahina hiala ny paradisa izy ireo. Tsy nahazo niditra tao amin'ny "hazon'aina" (Jesosy izany). Na dia niaina ara-batana aza izy ireo, dia maty ara-panahy, nandao ny maha-iray an'Andriamanitra ary voatery nanapa-kevitra samirery ny amin'izay tsara sy ratsy.
Efa notendren’Andriamanitra fa hifindra amin’ny taranaka fara mandimby ny fitahiana sy ny ozona. Niaiky io trosa lova io i Paoly ka nanoratra toy izao ao amin’ny Romana: “Koa tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray (Adama) ho amin’izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran’ny fahafatesana, no nahazoan’ny fahafatesana ny olona rehetra koa, satria samy efa nanota izy rehetra.” ( Romana 5,12).
Nolovako ny faniriako hahatsapa ny tenako ary hiaina amin'ny fiainako manokana avy amin'ireo ray aman-dreniko voalohany. Amin'ny fiainana miaraka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia mahazo fitiavana, fiarovana, fankatoavana ary fanekena isika. Raha tsy misy ny fifandraisana manokana sy akaiky an'i Jesosy ary ny tsy fisian'ny Fanahy Masina dia misy ny fahatongavan-tena ary mitarika amin'ny fiankinan-doha.
Nameno ny fiankinan-doha isan-karazany aho. Nandritra ny fotoana ela niainako teo amin'ny fiainako Kristiana dia nino aho fa hery ny Fanahy Masina. Nampiasa an'io hery io aho ary nanandrana nandresy ny fiankinan-doha na nitarika fiainana masina. Ny ahy foana no ifantohan'ny saina, te handresy ireo fiankinan-doha aho ary maniry ny tenako. Io ady io miaraka amin'ny finiavana tsara dia tsy nahavokatra.
Fantaro ny fitiavan'i Kristy
Inona no dikan’ny hoe feno ny Fanahin’Andriamanitra? Nianatra ny dikany tao amin’ilay taratasy ho an’ny Efesiana aho. «Mba homen’ny Ray anareo hery araka ny haren’ny voninahiny, mba hohamafisin’ny Fanahiny ao anatinareo, mba hitoeran’i Kristy ao am-ponareo amin’ny finoana. Ary mamaka sy miorina amin'ny fitiavana ianareo, mba ho fantatrareo miaraka amin'ny olona masina rehetra izay sakany sy lavany sy hahavony ary halaliny, ary hahalalanareo koa ny fitiavan'i Kristy, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, ho tanteraka mandra-pahatonganareo ny fahafenoan’Andriamanitra rehetra » (Efesiana 3,17- iray).
Ny fanontaniako dia: inona no ilaiko ny Fanahy Masina? Mba hahatakatra ny fitiavan'i Kristy! Inona no vokatr'izany fahalalana izany ny fitiavan'i Kristy mihoatra ny fahalalana rehetra? Ny fahafantarako ny fitiavan'i Kristy be dia be no ahazoako ny fahafenoan'Andriamanitra, amin'ny alàlan'i Jesosy izay mipetraka ato amiko!
Ny fiainan'i Jesosy
Ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty dia manan-danja lehibe ho an’ny Kristianina tsirairay, indrindra ho an’ny olombelona rehetra. Nisy fiantraikany lehibe teo amin’ny fiainako ankehitriny ny zava-nitranga tamin’izay. “Fa raha nampihavanina tamin’Andriamanitra isika tamin’ny nahafatesan’ny Zanany fony mbola fahavalontsika, mainka fa ny hahavoavonjy antsika amin’ny fiainany ankehitriny, rehefa nampihavanina” (Romana). 5,10). Ny zava-misy voalohany dia izao: mihavana amin’Andriamanitra Ray aho amin’ny alalan’ny soron’i Jesosy Kristy. Ny faharoa izay tsy hitako ela dia izao: Manavotra ahy amin'ny fiainany Izy.
Hoy i Jesosy: “Fa tonga Aho hanome azy fiainana, dia fiainana amin’ny fahafenoany.” (Jaona 10,10 avy amin'ny New Geneva Translation). Inona no ilain’ny olombelona amin’ny fiainana? Ny maty ihany no mila aina. “Ianareo koa dia efa maty tamin’ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo.” (Efesiana 2,1). Amin’ny fomba fijerin’Andriamanitra, ny olana dia tsy hoe mpanota fotsiny isika ka mila famelan-keloka. Lehibe lavitra ny olanay, maty isika ary mila ny fiainan’i Jesosy Kristy.
Fiainana ao amin'ny paradisa
Matahotra ve ianao sao tsy ho lasa toy izao intsony ianao satria nanolotra ny fiainanao tsy misy fepetra sy tsy misy fetra ho an’i Jesosy? Talohan’ny nijalian’i Jesosy sy ny nahafatesany, dia nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy fa tsy hamela azy ireo ho kamboty izy ireo: “Kely sisa dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao. Hitanareo anefa aho, satria velona Aho, ary tokony ho velona koa ianareo. Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo” (Jaona 14,20).
Tahaka ny iveloman'i Jesosy ao anatinao sy ny fiasanao amin'ny alalanao, dia miaina ao amin'i Jesosy koa ianao ary miasa! Miaina ao amin’ny fiombonana sy firaisana amin’Andriamanitra izy ireo, araka ny nahafantaran’i Paoly hoe: “Fa ao aminy no ivelomantsika sy iezahantsika ary itoerantsika.” ( Asa.7,28). lainga ny fahafantarana ny tena ao anatin'ny tena.
Taloha kelin’ny nahafatesany, i Jesosy dia nanambara ny fahatanterahan’ilay toetry ny paradisa: “Tahaka Anao Ray ato amiko, ary Izaho ao aminao, dia ho toy izany koa no ho ao amintsika, mba hinoan’izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy.” (Jaona. 17,21). Ny maha iray amin’Andriamanitra Ray sy Jesosy ary amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no tena fiainana. Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana!
Hatramin'ny nahatsapako izany dia nitondra ny olako rehetra sy ny fiankinan-doha ary ny fahalemena rehetra ho any amin'i Jesosy aho ary nilaza hoe: «Tsy vitako izany, tsy vitako irery ny manaisotra ireo eo amin'ny fiainako. Amin'ny firaisana aminao Jesosy sy amin'ny alalanao dia afaka mandresy ny fiankinan-doha aho. Tiako ianao hisolo toerana azy ireo ary mangataka aminao aho mba hamaha ny trosa mandova ny fahaleovan-tena amin'ny fiainako.
Andininy fototra iray ao amin'ny Kolosiana "Kristy ao anatinareo, fanantenana ny voninahitra", (Kolosiana). 1,27) Hoy ny momba anao: Raha niova fo ho an’Andriamanitra ianao, ry mpamaky malala, dia nahary fahateraham-baovao ao anatinao Andriamanitra. Nahazo fiainam-baovao izy ireo, dia ny fiainan’i Jesosy Kristy. Ny fony vato dia nosoloana ny fony velona (Ezekiela 11,19). Velona ao anatinao amin’ny alalan’ny Fanahy Jesosy ary velona ianao, manenona ary ao amin’i Jesosy Kristy. Ny firaisana amin’Andriamanitra dia fiainana tanteraka izay haharitra mandrakizay!
Misaora an'Andriamanitra miverimberina foana fa mipetraka ao aminao izy ary mamela ny tenanao ho tanteraka ao aminy. Misaotra anao mankasitraka, ity zava-dehibe ity dia miforona aminao!